Ilyaas Antaynle, Author at somalilandlivemedia
Ma Somaliland baa dhaymo u baahan, mise Muusaa isna dhaymo u baahan?
22. Dec 2017 0
Shaki kama jiro ninkasta oo garoonkaa kubada siyaasada lagu ciyaaraayo usoo banbaxa inay gaadhayaan dhaawacyo culusi habeen iyo maalinba, Soomaaliduna hore waa tii ugu maahmaahi jirtay “Nin xil qaada...
Wacanoo wanaagsan akhyaareey idil ahaantiinba waxaynu qormadan kooban ku eegidoonaa qorshaha labada xisbi ee Wadani iyo Kulmiye ee ku waajahan hanashada codadka ugu badan markay tahay dhanka gobolada ...
Gogolxaadhka maqaalka. Wacanoo wanaagsan akhyaareey idil ahaantiinba meelkastoo kala joogtaan ilaahayna Bishaa barakaysanee Ramadaanka khayrkeeda ha ina siiyo, intaa ka dib waxaynu qormadan kooban k...
“Coldoon xadhigiisii” Miyey Somaliland isku xishootay? Mise way kala xishootay?
Coldoon xadhigiisii" Miyey Somaliland isku xishootay Gogol xaadh Warsan iyo weedhsan iyo saadaal irmaan akhyaareey idil ahaantiinba, waxaynu qormadan kooban isku dul istaagidoonaa hadii eebe...